‘लिडरले लिडर जन्माउनुपर्छ’ - अन्तर्वार्ता - नारी
‘लिडरले लिडर जन्माउनुपर्छ’
महिला सशक्तीकरण हुनुपर्छ । जति पनि महिला निर्णायक तहमा पुगेका छन् उनीहरूले आफ्नो मातहतमा रहेका (जुनियर) लाई माथि ल्याउन सपोर्ट गरी उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । मेरो सोच ‘लिडरले लिडर जन्माउनुपर्छ, फलोअर होइन ।’ मैले यो ठाउँ छोडे भने त्यहाँ अर्को महिला आउनुपर्छ भन्ने स्थिति बनाइदिनुपर्छ ।
डा. संगीता मिश्र– निर्देशक, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, थापाथली
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालकी निर्देशक डा. संगीता मिश्र प्रो–एक्टिभ तथा आफैं अग्रसर भई काम गर्ने स्वभावकी छन् । गत असारमा उनी परोपकारकी निर्देशक बनेकी हुन् । भारत झारखण्डस्थित राँचीमा जन्मेकी, हुर्केकी र प्रारम्भिकदेखि एमबीबीएससम्मको शिक्षा उनले त्यहींबाट पूरा गरिन् । सन् २००५ मा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमडी गरेकी उनले सन् २००९ मा अमेरिकास्थित जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयबाट पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमपीएच शिक्षा हासिल गरिन् । उनले धरानको बीपी कोइराला प्रतिष्ठान र काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत तथा कोसी अञ्चल अस्पतालमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेड भई सेवा गरिसकेकी छन् । कोभिड–१९ को कहर जारी रहेकै बेला कोसी अस्पतालमा कार्यरत रहँदा विराटनगर महानगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी राम्रो काम गरेको भन्दै उनले धेरै प्रशंसा बटुल्न सफल भइन् । महिला, स्वास्थ्य, कोरोनालगायतका विषयमा केन्द्रित रही डा. संगीतासँग नारीकी उपासना घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
स्वास्थ्यका विविध क्षेत्र हुँदाहुँदै स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ बन्ने सोच कसरी आयो ?
सुरुदेखि नै मलाई प्रसूति तथा स्त्री रोग र पब्लिक हेल्थमा रुचि भएकाले गाइनोकलोजी विषय पढेकी हुँ ।
उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका पुगेका बेला उतै काम गरी बस्न मन लागेन ?
अमेरिकामा पढ्दा जागिरको प्रस्ताव आएकै हो । मेरो विचारमा अमेरिका अध्ययनका लागि ठीक हो । मलाई आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ, करिअर यहीं छ भन्ने लाग्यो र नेपाल फर्किएँ ।
कतिपय चिकित्सक त उपत्यकामै काम गर्न मन पराउँछन्, तपाईंले विराटनगर किन रोज्नुभयो ?
२०६९ मा लोकसेवामार्फत सरकारी सेवामा प्रवेशसँगै मेरो पोस्टिङ काठमाडौंस्थित प्रसूति गृहमा भएको थियो, तर मैले कोसी अस्पताल रोजें । सुरुदेखि नै विराटगरमा महिलाका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने मेरो अठोट थियो । त्यही अठोटले मलाई त्यता तानेको हो । विराटनगरमा ‘अफिस अफ डिफेन्स कर्पोरेसन अमेरिकन आर्मी’ सँग समन्वय गरी महिला अस्पतालको शिलान्यास गरिसकेकी छु ।
कोभिड–१९ को सुरुवातमा विराटनगरमा तपार्इंले खुबै चर्चा पाउनुको कारण के हो ?
संजोग नै भन्नुपर्छ, कोभिड आउनु र म मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनु सँगसँगै भयो । मेरा लागि नयाँ प्रशासनिक अनुभव, जिम्मेवारी र सँगसँगै चुनौती पनि थियो । ३ सय ५० बेडको अस्पताल हाँक्नु र ५ सय ५० कर्मचारी लिएर चल्नु, सँगै कोभिड व्यवस्थापन गर्नु सुरुमा एकदमै चुनौती थियो । केही बाधा अवरोध पनि भयो । तर, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग राम्रो समन्वय गरी छुट्टै कोभिड अस्पताल स्थापना गर्न सकेंं । नेपालभरमा सबभन्दा पहिले उदयपुरको भुल्केमा कोभिड आउटब्रेक भएको थियो । त्यो बेला त्यो म्यानेज गर्न कोसी अञ्चल अस्पताल सफल भयो । सायद त्यही भएर चर्चा पाएँ कि ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा कार्यभार सम्हाल्दा कस्तो महसुस भएको छ ?
प्रसूति गृहको निर्देशक हुँदा अवार्ड नै पाएजस्तो लागेको छ । ठूलो जिम्मेवारी पाएकी छु, यसको पालना र कार्यान्वयन पनि राम्ररी गर्नेछु । कोभिडका कारण परिस्थिति अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ छ । अस्पतालको सीमित जनशक्ति, बिरामीको चाप पनि त्यति नै छ । कोभिड पोजिटिभ महिलाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, एक किसिमको त्रास र अन्योल पनि छ । अलिकति अप्ठ्यारो छ तर पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छु, त्यसैले सहज छ ।
प्रसूति गृहमा कोभिडका पोजिटिभ बिरामीको म्यानेज कसरी भइरहेको छ ?
पहिलेको तुलनामा अहिले यसका बिरामी बढेका छन् । हरेक दिन शंकास्पद १२ जना जति महिला आउने गरेका छन् । कोभिड पोजिटिभका लागि नेपाल सरकारको दुई सय बेड बनाउने योजना भए पनि तत्कालका लागि ३० जनाको बेड क्षमता छ ।
कोभिडका कारण महिलाले के–कस्ता स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपरेको छ ?
डरले पनि अस्पताल आउने महिला छन् । लकडाउनका कारण ल्याइदिने मानिस छैनन् । यो समयमा महिलामा अनिच्छित गर्भधारणको समस्या एकदमै बढेको छ । परिवार नियोजनका साधनमा कमी आएको छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाएका छैनन् । सानो रोगको समयमै उपचार नहुँदा विकराल रूप लिएको छ । समयमै अस्पताल जान नसक्दा मातृ मृत्युदर वृद्धि भएको छ । कोभिड अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने थाहा नभएकाले योसँगै बाँच्न सिक्नुका साथै खानपिनमा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो ।
उपचार गरेको बिरामी निको हुँदा कस्तो महसुस हुन्छ ? काम गर्दाका केही अविष्मरणीय घटना बताइदिनु न ।
उपचारपछि निको भएकाको हाँसोले दिने सन्तुष्टिभन्दा अरू ठूलो केही छैन । कोसी अस्पतालमा कार्यरत रहँदा एउटी महिला असुरक्षित गर्भपतन गरेर आएकी थिइन्, पाठेघरमै प्वाल परेको थियो, हामीले अप्रेसन गर्‍यौं । रक्तस्रावका कारण ती महिलालाई रगत पनि धेरै चढाउनुपर्ने भयो । रगत चढाउँदा उनको शरीरमा रगत जम्ने क्षमता घटिसकेको थियो, त्यतिबेला हाम्रो टिमले धेरै प्रयासपछि महिलाको पाठेघर जोगाउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको थियो ।
महिला भएर जिम्मेवार पदमा रहँदा कत्तिको अप्ठ्यारो महसुस भएको छ ?
आफूमाथि पूर्ण विश्वास भएकाले मलाई अप्ठ्यारो कहिले पनि भएन । काम गर्ने बेलाको एउटा अनौठो अनुभव छ, मसँग । पहिलो पटक विराटनगरमा कोभिड कमिटीको मिटिङ थियो, जसमा सबै कार्यालय प्रमुखदेखि जिम्मेवार पदका विभाग (पुलिस, प्रशासन, सीडीओ, नगरपालिकाका मेयर) का सँग म एक्लो महिला थिएँ, त्यो हलमा । त्यति बेला निर्णायक तहमा महिला सहभागिता कति कम छ भन्ने महसुस मैले गरें । निर्णायक तहमा महिला हुनु कत्तिको जरुरी छ भन्ने कुरा पनि त्यही दिन महसुस गरें । काम गर्दा मलाई अप्ठ्यारो नभए पनि निर्णायक तहमा महिलाको संख्या कति न्यून रहेछ भन्ने महसुस गरायो । मलाई आफ्नो क्षमतामाथि कहिले पनि प्रश्न उठेन । प्रतिस्पर्धामा पुरुष भए पनि महिलाले आफ्नो हिसाबले र पुरुषले आफ्नो हिसाबले काम गर्ने हो ।
निर्णायक तहमा महिलाको संख्या बढाउन के गर्नुपर्ला ?
सशक्तीकरण हुनुपर्छ । जति पनि महिला निर्णायक तहमा पुगेका छन् उनीहरूले आफ्नो मातहतमा रहेका (जुनियर) लाई माथि ल्याउन सपोर्ट गरी उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । मेरो सोच ‘लिडरले लिडर जन्माउनुपर्छ, फलोअर होइन ।’ मैले यो ठाउँ छोडे भने त्यहाँ अर्को महिला आउनुपर्छ भन्ने स्थिति बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि त्यो तहमा पुग्न सक्ने सम्भावित क्षमतावान महिलामा नेतृत्व गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
महिला जागरुक हुनका लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
जनचेतना, शिक्षा र अवसर जरुरी छ । महिलाको कामलाई आर्थिक लाभको हिसाबले हेरिन्छ, जबकि उसले काम गर्नु स्वावलम्बनका लागि जरुरी छ । उसलाई आफैं आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न जरुरी छ । जागिर गरेर कति आम्दानी हुन्छ भन्ने कुराभन्दा पनि जागिर गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । त्यसले महिलामा स्वाभिमान, आत्मविश्वास बढ्छ । काम गरिरहेका महिलाले घरको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्दा दोहोरो भूमिकामा छन्, त्यसैले घरको जिम्मेवारी अरूले पनि लिइदिनुपर्छ । महिला दुवैतिरबाट पेलिनु भएन । कतिपय कुरामा महिला र कतिपय कुरामा पुरुष राम्रा छन् । त्यसैले मेरो, तेरोभन्दा पनि हाम्रो भन्ने साझा जिम्मेवारीको धारणाले अघि बढ्नुपर्छ ।
महिला आ–आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार पदमा पुग्नका लागि के गर्नुपर्ला ?
सपना देख्नुपर्छ । लक्ष्यमा पुग्छु भन्ने अठोट लिनुपर्छ । आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सुरुदेखि नै लगनशील भएर लागिपर्नुपर्छ । समुदायसँग लड्न र आफ्ना लागि आफैं बोल्न सक्नुपर्‍यो । म सक्छु भन्ने कुरा सोच र व्यवहारमा पनि देखाउनुपर्छ ।
बाहिरी जिल्ला र यहाँको महिलाको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो पाउनुभयो ?
लगभग उस्तै–उस्तै छ । काठमाडौंलाई ठूलो ठाउँ बुझे पनि यहाँ महानगरमा हुने गरिबी (अर्बन पोभर्टी) धेरै छ । काठमाडौं बस्दैमा स्वास्थ्य राम्रो हुने होइन । ग्रामीण भेगबाट रेफर भएर आउने महिला पनि उत्तिकै छन् । समग्रमा महिलाको स्वास्थ्य हेर्ने हो भने उस्तै छ । सेवामा पहुँचको हिसाबले काठमाडौंमा अलिकति राम्रो छ, उताको तुलनामा । तर, स्वास्थ्य अवस्था र जागरुकता उस्तै–उस्तै छ । पढेलेखेकामा जागरुकता यहाँ र उता उस्तै छ ।
पहिलेको तुलनामा महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार भएको हो ? स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्छ ?
पहिलेभन्दा अहिले राम्रो छ । पहिले धेरै महिलामा एनिमिया देखिन्थ्यो । कतिपय महिलाले रोग लुकाउँथे । असुरक्षित गर्भपतन धेरै गराउँथे । स्वास्थ्यबारेमा आफैं निर्णय गर्न सक्दैनथे । अहिले त्यो अवस्था नभए पनि अनुपातिक हिसाबले सुधार धेरै कम छ । यो क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । समानतासँगै समता (इक्विटी) को कुरा गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनका लागि जनचेतना हुनुपर्छ । महिला परिवारको पिलर हो । महिला स्वस्थ र खुसी छ भने परिवारै स्वस्थ र खुसी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ । यसका साथै महिलाको स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको मुद्दा भएमा मात्र सुधार हुन्छ । राज्यले महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्‍यो ।
स्वास्थ्यमा काम गर्ने र पिछडिएको (दलित) बालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम गर्ने इच्छा छ । पिछडिएका बालिकालाई शिक्षित बनाएर मूलधारमा पुन:स्थापन गर्ने योजना छ । साथै महिला सशक्तीकरणमा पनि काम गर्ने इच्छा छ ।